Gbasara anyị - Tianfeng Environmental Materials Technology Co., Ltd.
Environmental Materials Teknụzụ Co., Ltd.
Anyị nwere ihe karịrị 10 + afọ nke n'ichepụta ahụmahụ
Anyị bụ ndị na-eduga irè ọrịa akara ọkachamara, mgbochi nje na ire ọkụ-retardant ọgwụ disposable ákwà mgbochi rụpụta. Site na ngwaahịa anyị dị elu, anyị abụrụla otu ụlọ ọrụ tụkwasịrị obi na ụlọ ọrụ maka ụlọ ọrụ ahụike.
Ntinye aka anyi n’inweta nsonaazụ enyerela anyị aka iwulite mmekọrịta anyị na ndị ahịa anyị n’ụwa niile ogologo oge ma sorozu nkwa anyị oge ọ bụla.
Suzhou Tianfeng Environmental Materials Technology, nke e guzobere na 2008, bụ ụlọ ọrụ zuru ezu ọkachamara nke ụlọ ọgwụ nwere ike iwepụ ngwa ngwa nwere ike nyocha na mmepe, imepụta na mmepụta. Ngwaahịa anyị gụnyere ákwà ngebichi a na-ekpofu ekpochapu, ákwà mgbochi na mbadamba akwụkwọ. Ha nile nwere nko na nkpuchi oku tinye. Emere ákwà ngebichi ọhụụ a nwere ike iji dochie ákwà mgbochi ndị nwere ike iji ya wee wepu ya na nnukwu ọnụ ahịa ego yana njikwa njikwa ọrịa.
POLYPROPYLENE Production EZIOKWU
Usoro mmepụta a bụ filament polypropylene fiber spunbonded nonwoven fabric equipment. Akụrụngwa ya bụ polypropylene (PP). Ngwongwo na-enweghị akwa anyị na-emepụta nwere nnukwu ike, ịdị nro dị mma, enweghị ihe ọ bụla, mgbochi nje, mmebi nsị, ike dị elu na elongation. Agba na ịdị arọ nke akwa ahụ nwere ike ịdị iche iche dị ka mkpa ndị ahịa si dị.
13+ afọ 'ahụmahụ n'ichepụta disposable cubicle ákwà mgbochi.
Ọkọlọtọ Mba Nile
Egosipụtara iji zute ụkpụrụ mba ụwa nke nje na-egbochi nje na ire ọkụ.
Independent mmepụta nje na-emepụta akara.
Ndị Ọkachamara Ọkachamara
Ndị Ahịa Obi Happytọ